कावासोती, १ असोज । नवलपुरको बिश्नुनगरमा एम्बुलेन्स सेवा संचालनमा आएको छ । मातृभूमि युवा क्लव कावासोती–६ ले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । एम्बुलेन्स सेवाको बुधबारबाट कावासोती नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष हेम...
रबिन्द्र यादव नवलपरासी पश्चिम, १ असोज । नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिका–५ रतनगंज की पुजा लोनियाको हत्या गरिएको भन्दै स्थानीयवासीको अारोप छ तर अहिलेसम्म हत्यारालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै आइतवार सदरमुकाम...
मुस्लिम अरू समुदाय जस्तै मुलुकको एउट महत्त्वपूर्ण समुदाय हो। देश निर्माण गर्नामा मुस्लिमहरूको पनि रगत, पसिना र बलिदानी सामिल भएको कुरा स्पष्ट छ। मुलुकको हरेक परिवर्तनमा मुस्लिमहरूको योगदान इतिहासको पानामा छर्लङ्ग छ।यो समुदाय बिना देशको...
कावासोती, ३० भदौ । नवलपरासी पूर्व नवलपुरको विनयीखोलामा रु नौ करोडको लागतमा पुल निर्माण गरिएको छ । विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका–४, अन्तर्गत पर्ने विनयीखोलामा नेपाल सरकारको केन्द्रीय बजेटबाट पुल निर्माण गरिएको हो । दुम्किबासबाट पाल्पाको रामपुर हुँदै...
सदिक्षा गैरे कावासोती २८ भाद्र । नवलपुरको कावासोतीमा २ बस ठोक्किदा ९ जना यात्रु घाईते भएका छ्न् । कावासोती न.पा. ८ थकाली चोक स्थित पुर्व पश्चिम राजमार्गमा पश्चिम बाट पुर्व तर्फ आउने क्रममा राजमार्गमा रोकिराखेको...
सहबान अन्सारी नवलपरासी, २८ भदौ । विश्व प्रथमिक उपचार दिवशको अवसरमा बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईएको छ । त्यस्तै आज नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नं १६ हकुईमा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ...
सदिक्षा गैरे कावासोती, २६ भाद्र । नवलपुर प्रहरिले एक महिलाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ गरि सार्बजनिक गरेको छ । गैडाकोट १५ मनकामना टोलमा वस्ने ६८ बर्षीय भुमादेवी खत्रीको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा चार...
परासी, २६ भदौ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले पश्चिम नवलपरासीस्थित ऐतिहासिक रामग्राम स्तुपको आज बिहान स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिका–७ स्थित भगवान् गौतमबुद्धको सिङ्गो अस्तुधातु रहेको एकमात्र स्थल रामग्राम...